News - Ọrụ na uru nke uwe ịgba ígwè
Ọrụ na uru nke akwa ịgba agba
Ugba cgba ígwè bụ ọtọ ọrụ, dị ka nchekwa, wicking, breathable, mfe asacha, ngwa-ihicha, wdg Cygba ígwè jerseys na pụrụ iche akwa, na-elu ike, ezi elasticity, ezi extensibility, na ezi abrasion eguzogide nwere ike na-ahuta ka a ọtọ uwe mwụda egwuregwu. Uwe dị elu nke uwe ịgba ịnyịnya ígwè kwesịrị ịnwe ume na ọsụsọ, nke nwere ike iwepụta ọsụsọ ngwa ngwa ma mee ka elu ahụ kpoo. Ala nke jersey na-agba ịnyịnya ígwè kwesịrị ịdị sie ike, na-ebelata ike ọgwụgwụ akwara, ihe nkedo crotch ga-adị nro ma nwee ezigbo ikuku ikuku. Ka anyị kwuo banyere nkọwa nke uwe ịgba ígwè.
Ọtụtụ ndị enyi na-eche na ụcha uwe akpụkpọ ụkwụ na-egbu mara oke. Amaghi ma imebe a bu ihe nchebe. A na-eji ịdọ aka ná ntị na-acha odo odo, ọbara ọbara, acha anụnụ anụnụ na agba ọcha eme ihe nke ukwuu. Ihe kpatara ya bụ na mgbe ị na-aga n'okporo ụzọ, onye ọkwọ ụgbọ ala na ndị na-aga ije nwere ike ihu gị nke ọma site n'ebe dị anya, ma gbaa mbọ zere ihe ọghọm okporo ụzọ.
Ọtụtụ ndị enyị họrọla uwe mgbokwasị ga-ajụ, kedu ihe akwa akwa nke elu na nke ala uwe mwụda dị iche? Dịka e kwuru na mbụ, uwe ndị kachasị elu ga-eme ka ọsụsọ pụọ, uwe ala ga-ebelata ike ọgwụgwụ. N'ihi ihu igwe, mgbe ihu igwe dị oyi, a na-ejikarị akwa ndị na-ekpo ọkụ, nke na-eku ume na ikuku, ma ọ bụ akwa mkpuchi ikuku na akwa ume na-eji obe agafe dị ka akụkụ dị iche iche. Mgbe ihu igwe na-ekpo ọkụ, ọsụsọ na-egbu, na-eku ume, dị mfe ịsacha ma na-ehicha ngwa ngwa ghọrọ nhọrọ mbụ, yana ikekwe site na ọnọdụ ahụike, enwere akwa na-arụ ọrụ nwere ihe dị elu maka nsị na deodorization. Uwe a na-agba ịnyịnya ígwè kwesịrị ịdị nso na ahụ dị ka o kwere mee iji belata mgbochi ikuku dị ka o kwere mee. Uwe ndị na-agba ịnyịnya mmiri ga-enwe ọrụ maka ichebe ahụ, uwe ndị a na-agba ịnyịnya ga-enwerịrị nkwụsị, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ nwere mkpọka, ọ nwere ike belata mpaghara azụ. Nke abuo, enwere okwute maka uzo na-agba ịnyịnya iji gbochie esemokwu na nrụgide ogologo oge n'etiti oke na oche, na iji chebe ahụ.
Oge nzipu ozi: Jul-18-2020